Wararka - Muuqaalada iyo Rajada Waxsoosaarka Qaybaha Mashiinka Saxda ah
Qaybaha aluminium ee CNC
Qaybta naxaasta CNC
Qaybaha birta ahama ee CNC
Qaybta caaga ah
Astaamaha iyo Rajada Waxsoosaarka Qaybaha Mashiinka Qiyaasta
Warshadaha saxan ee saxsani had iyo jeer waxay ahaayeen warshad xoog-xoog leh, caasimada-culus, iyo tiknoolajiyad-intarnet-adag. Warshaduhu waxay leeyihiin marin sare. Xitaa haddii shirkad guud aysan gaarin heer cayiman, way adkaan doontaa in faa'iido la soo saaro. Shirkadaha waaweyni waxay yareyn karaan kharashaadka iyagoo soo maraya wax soo saar ballaaran iyo wax soo saar, isku dubaridka ganacsiga, waxayna dhisi karaan suuq iib ah oo heer gobol ah oo daboolaya wax soo saarka gobollada iyo warshadaha kala duwan. Sidaa darteed, warshadaha mashiinka saxda ah waxay leeyihiin dabeecad xoog badan oo Hengqiang ah. Mustaqbalka, warshadani waxay inta badan diiradda saari doontaa isdhexgalka, isdhexgalka gobolka, isdhexgalka silsiladaha warshadaha iyo isdhexgalka istiraatiijiga ah.
Waxaa ka mid ah, is-dhexgalka gobolka waa isku-darka shirkadaha ka shaqeynaya saxda ee isla gobolka, sidaas darteed waxay diiradda saari kartaa ku-dhaqanka siyaasadaha iyo faa'iidooyinka maaraynta, waxayna soo saartaa is-waafajin iyo iskaashi wanaagsan. Is-dhexgalka silsiladda warshadaha waa hawl keliya oo ay ku mideysan yihiin warshadaha wax-soo-saarka, ama shirkadaha wax soo saarka hoose waxay la shaqeyn karaan alaab-qeybiyeyaasha muhiimka ah si ay u xalliyaan caqabadaha farsamo ee soo food saara qaybaha adag; isdhexgalka istiraatiijiyadeed waa hordhaca wada-hawlgalayaasha istiraatiijiga ah sida gawaarida iyo milatariga si loo fahmo baahida hoose ee loo yaqaan Grasp, taas oo si sax ah loo horumariyo, loo horumariyo alaabada la bartilmaameedsanayo, iyo in la yareeyo khasaaraha aan loo baahnayn inta lagu jiro cilmi baarista iyo horumarka.
Nidaamyada lagu shaqeynayo qaybaha saxda ah waxay leeyihiin shuruudo aad u adag. In yar oo taxaddar la'aan ah inta lagu guda jiro howsha ayaa sababi doonta khaladka shaqada in uu dhaafo xadka dulqaadka, waxaana lagama maarmaan noqon doonta in dib loo habeeyo ama lagu dhawaaqo qashinka banaan, taas oo si weyn u kordhineysa qiimaha wax soo saarka. Sidaa darteed, maanta waxaan ka hadlaynaa shuruudaha ka-shaqeynta qaybaha saxda ah, taas oo naga caawin karta inaan horumarinno wax-soo-saarka wax-soo-saarka. Midka hore waa shuruudaha cabbirka. Hubso inaad si adag u raacdo foomka iyo shuruudaha dulqaadka sawirka ee qaabeynta. In kasta oo qaybaha ay farsameeyeen ee ay soo saartay shirkaddu aysan si sax ah ula mid noqon doonin cabirka sawirka, cabirka dhabta ah wuxuu ku dhexjiraa dulqaadka cabirrada aragtiyeed, kuwaas oo dhammaantood ah badeecado aqoon u leh loona adeegsan karo qaybo.
Marka labaad, xagga qalabka, qallafsanaanta iyo dhammeystirka waa in lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo qalab leh waxqabad kala duwan. Sababtoo ah geeddi-socodka qallafsan ayaa jaraya qaybo badan oo ka mid ah faaruqinta, shaqadu waxay abuuri doontaa qaddar badan oo culeys gudaha ah marka quudinta ay ballaaran tahay iyo qoto dheerida goynta ay weyn tahay. Waqtigaan, dhameystirka lama sameyn karo. Markay qalabka shaqadu dhammaado wakhti cayiman, waa inuu ku shaqeeyaa mashiin saxsan si shaqaaluhu u gaadho saxsanaanta sare.
Falanqaynta qaybaha saxda ah badanaa waxay ku lug leedahay daaweynta dusha sare iyo daaweynta kuleylka. Daaweynta dusha sare waa in la dhigaa ka dib marka si sax ah loo farsameeyo. Iyo habka saxda ah ee farsamaynta, dhumucda lakabka khafiifka ah ka dib daaweynta dusha sare waa in la tixgeliyaa. Daaweynta kuleylka waa in la hagaajiyo waxqabadka jarista birta, sidaas darteed waxay u baahan tahay in la sameeyo ka hor inta aan la farsameynin. Waxyaabaha kor ku xusan waa shuruudaha la raacayo ka shaqeynta qaybaha saxda ah.
Waqtiga dhejinta: May-27-2020
Marabtaa inaad inbadan ogaato
No.16, Dalong Road, Shigu Industrial Zone, Degmada Nancheng, Dongguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Nagala soco baraha bulshada.
Right right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.